Gpws ma shaqeynayo diyaarad kasta
Su'aal Gpws ma shaqeynayo diyaarad kasta
1 sano 9 bilood ka hor #760 by aamalk
Waxaan xayiray agagaarka 5 oo ku darsaday diyaaradaha oo sheegay in uu leeyahay gpws laakiin ma maqlo wax kasta oo aan soo degayo. Ma waxaad u baahan tahay inaad awood u hesho meel ama si toos ah u shaqeyso?
1 sano 4 bilood ka hor - 1 sano 4 bilood ka hor #937 by DRCW
Faylasha codka FSX waa la hawlgeliyaa iyadoo la adeegsanayo faylasha dll iyo version 64 waxay u hawlgalaan iyaga oo isticmaalaya xml. Haddii aad daalan tahay waad bedeli kartaa faylashaas si xml
Inkasta oo magaca magaciisu yahay FSX, cabiradani waxay sidoo kale ka shaqeyn doontaa FS2004. Waxaa si weyn ugu saleysan dsd_xml_sound3.gau.
Isbedelka ugu muhiimsan ee farsamaynta calaamaduhu waa habka ay wax uga qabato goobaha mugga. Noocyada hore ee shaxanka waxay adeegsadeen kala duwanaansho 0 illaa 100 si loo helo / loo dejiyo heerarka wareegga. Waxaan tan bedelay qiyaasta loo isticmaalo DirectSound, -10000 (oo matala, aad u aamusnaan) 0 (matalaya mugga buuxa). Haddii isbeddeladani ay kugu adkaato inaad ku adkeysato koodhkaagii hore, waxaad sameyn kartaa variable (L: Old Control Volume Control) si aad ugu celiso habka hore ee habka hore loo isticmaalo. Hoos eeg.
Kuwa aan isticmaalin noocyada hore ee cabirlaha, cod kasta wuxuu xakameyn karaa xero XML oo kala duwan L: Variable (Badanaa loo yaqaan LVar.) Waxaad xakameysaa codka adoo dejinaya variable variable (LVar) qiimaha u dhigma talaabada aad rabto. Waxaad ku wareejineysaa LVars si aad u codsato faylka qaabeynta. Sifee faylka qaabka ee panel.cfg, sida sheyga shanaad ee "Muuqaalka" qalabka "Sound" - fiiri tusaalaha kore. Cabbiraadu waxay raaci doontaa hababkan soo socda si loo qiimeeyo xaraf farsamo oo la socda:
1. Waxaad sheegtaa dariiqa qaraabada ah adoo ku bilaabaya 'dhibic' - fiiri tusaalaha tusaalaha ah ee kor ku xusan. Dhibaatadani waxay si wax ku ool ah noogu soo rogi kartaa qaybta FS ee ugu weyn. Tusaalaha kor ku xusan, faylka .ini wuxuu ku yaalaa faylka ugu muhiimsan ee FS, oo waxaa loo yaqaan dsd_xml_sound.ini. Adigu kuma xaddidneysid FS miisaanka FS, waxaad soo sheegi kartaa faylkaaga aad jeceshahay Dhibaatada keliya ayaa hubinaysa in isticmaalaha ugu dambeyn uu haysto faylka aad ku qorto habka faylka FS. Tani waa qaabka loo isticmaalo qaababkii hore ee codka.
2. Beddel ahaan, waxaad u dhisi kartaa waddo qancin ah oo ku saabsan faylka qaabeynta. Qaab-dhismeedka wuxuu eegayaa waddadiisa u gaarka ah. Markaad ka saartid magaca calaamadda laftiisa, waxaan ka tagnay wadada qashinka gaarka ah halkaasoo lagu dhejiyo qiyaasta. Magaca wadankan, waxaad ku dari doontaa faylka gaarka ah iyo magaca faylka faylka qaabeynta. Tusaale ahaan, diyaaradahayga imtixaanka ee caadiga ah waxaa lagu dhejiyaa fayl loo yaqaan "
Ku rakibida weelka ku jira guddi-hoosaadka, iyo qeexaya faylka qaabeynta qaabkaas:
waxay dhalin doontaa qeexitaanka qaabeynta
D: \_ fsx \_ Aircraft \_ b777_300 \_ panel \_ dsd_fsx_test_sound.ini - dejinta faylka qaabaynta ee galka panelka, oo leh qiyaasta codka
Fadlan ogow in qaabkan, ma jiro 'dhibic' bilowga bilowga panel.cfg, laakiin xadhiggu wuxuu ku bilaabmaa a / ama \_ dabeecadiisa. Cabbiraadku wuxuu ula dhaqmi doonaa / iyo / ama sawirrada si siman.
3. Haddii calaamaddu aanay helin dhibco ama dabeecad jilicsan bilowga astaamaha xarriiqda, waxay raadinaysaa xariga loogu talagalay dabeecada guska ":" Haddii ay mid ka mid tahay, waxay u qaadan doontaa in aad bixisay dariiq dhamaystiran oo ay ku jiraan warqad ka-qaadid, faylka qaabeynta iyo isku dayi doonaan in ay ku dhejiyaan iyada oo aan wax isbedel ah.
Uma jeedin habkaan in wax kasta oo aan ahayn isticmaalka gaarka ah ee kombuyuutarkaaga. Sifeynta faylka habka qaabeynta sida "D: \_ fsx \_ gauges \_ sound_config.ini" waydiisanayaan dhibaato haddii aad qeybinayso guddi. Xaqiiqdii ma ogaanno meesha uu isticmaaluhu dhammaystiray FS.
4. Haddii calaamaddu aysan helin "": "dabeecad, waxay u maleyneysaa inaad isku dayeyso inaad u sheegto hab isku mid ah nidaamka 2, kor ku xusan. Waxay ku dhejin doontaa xariijinta xarriiqda la socotey ee waddada halka ay ku dhejin karto shaashadda, siinta dabeecada jilicsan ee loo baahan yahay. Joogitaanka tusaalaha ah ee diyaaradahayga imtixaanka, iyada oo la adeegsanayo qiyaasta galka guddiga, bixinta xarfaha faylka sida tan:
5. Faylka qaabka caadiga ah. Haddii aan lahayn faylka qaabeynta, ama haddii aan la ogaan karin helitaanka faylka la cayimay, waxay isticmaali doontaa magaca magaca. Qaab-dhismeedka wuxuu raadin doonaa magaciisa aqoonta u leh (haddii adiga ama qofkii ugu danbeeyay dib u magacaabo), ka gooyo faylka ".gau", oo ku dar ".ini" qiyaasta, oo leh magac isku mid ah. Habkani waa inuu yareeyaa shuruudaha lagu qeexayo faylka qaabeynta qaabab badan oo badan. Ogsoonow in haddii qiyaasta ay u adeegsanayso calaamadda sababtoo ah adigu ma sheegin faylka qaabeynta, waxay si fudud u qaban doontaa iyada oo aan ado kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay isticmaalayso default sababtoo ah ma ay heli kartaa faylka aad ku qeexday, waxay ku soo bixi doonaa sanduuqa farriinta Windows ee kuu sheegaya sidaas.
Abuuritaanka Faylka Qalabka
Faylka qaabeynta waxaa loo isticmaalaa dhowr arrimood. Kuwa ugu muhiimsan ee ka mid ah kuwan ayaa sameeynaya isbarbardhiga u dhexeeya codadka aad rabto in aad ciyaarto iyo LVar aad isticmaali doonto si aad u xakamayso dhawaaqa. Haddii aad eegto liiska faylka .ini ee dhamaadka dukumeentigan, waxaad ka arki doontaa in ay ka kooban tahay saddex qaybood oo cinwaankiisu yahay. Kuwaas waxaa ka mid ah [Sounds] oo mid waxaa loo yaqaan 'LVars'. Mid kastaa wuxuu leeyahay liiska lambarrada lambarada. Tirinta waa sida xiriirka udhaxeeya codka iyo LVar. Fadlan ogow in taasi ay tahay muhiimada kaliya ee tirinta qorista. Codka gelitaanka Sound00 waxaa la barbardhigayaa LVar at Lvar00, codka gelitaanka Sound01 waxaa la barbar dhigaa LVar at Lvar01, iwm.
Sida aad hadda u soo ururisay, marka la tilmaamayo LVars ee faylka qaabeynta, waxaad kaliya bixisaa magaca qaawan. Ma ku darin "L:" bilawgii, ama ", lambarka" dhammaadka. Tani waxba kuma laha sida aad u heli karto doorsoomayaasha XML, waxay ku habboon tahay sida habka C / C ++ ay ula shaqeynayso doorsoomayaashaas.
Markaad abuurayso qoraallada dhawaaqyada iyaga oo ku jira faylka qaabeynta, waxaad sameyn kartaa, haddii aad rabto, qeex mugga si loogu isticmaalo codka marka la soo dhejiyo. Fiiri labada safka hore ee codka ee faylka .ini sample ee hoose. Doorashadani waa mid faa'iido leh haddii adiga, ama isticmaalaha ugu dambeeya ee alaabtaada, dareemaan dhawaaq ama codad gaar ah, sida lagu duubay, aad u qayliyay. Waxaad sheegi kartaa mugga si loo isticmaalo, sidaas daraadeedna uma baahnid inaad ku dhibeyso adigoo cabiraya cabirkaaga. Qeexidda qaylo-dheelitirneed sidan ayaan kaa hor istaagi doonin inaad bedesho heerka mugga marka dambe.
Markaad ku muujinayso dhawaaqyada faylka qaabeynta, cabirku wuxuu raaci doonaa nidaamyada isku midka ah ee muujinaya magacyada dhawaaqa sida ay u sameeyaan tilmaamida magaca faylka qaabeynta. Waxaad isticmaali kartaa waddo qaraabo ah (oo ka bilaabma "dhibic" oo adoo tixraacaya faylka gudaha FS Folder folder) ama waxaad dhisi kartaa wadad khaas ah, adigoo isticmaalaya habka qaabka qaabeynta qaabka saldhiga (isagoo tilmaamaya / ama / dabeecada ugu horeysa ee xarriiqda bedbeddelka, ama adigoo taxaya faylka iyo faylka adigoo aan leexin.) Fiiri nambarka codka koowaad ee faylka .ini sample ee hoose. Waxay qeexaysaa fayl la yiraahdo PanelSounds, oo ku yaala faylka ku yaala faylka qaabeynta qaabka, sida goobta loogu talagalay faylka codka.
Cabbiraadku ma xaqiijin doono magacyada dhawaaqa shakhsiyadeed goortii wakhtiga gaaban. Si kastaba ha ahaatee, waxay isticmaali doontaa sanduuqa farriinta Windows si loo ogeysiiyo qofka codka ah inaan dhawaaq gaar ah la heli karin marka isku day la sameeyo si loo ciyaaro codka.
Qeybaha ku jira kooxda saddexaad, [Config] ayaa dib loo eegayaa mar dambe.
La shaqaynta dhawaaqyada
Si aad u xakamayso codka la bixiyay, waa arrin u taagan in LVar u dhiganta qiimaha hoos ku taxan ee ficilka aad rabto:
1 (> L: SomeXMLControlVar, lambar) wuxuu ku ciyaari doonaa codka mar, iyada oo aan wax isbeddel ah lagu sameynin mugga ama goobaha isku-hagaajinta.
0 (> L: Qaar kaleOtherXMLControlVar, lambar) waxay joojin doonaan codka haddii ay ciyaarayaan.
8 (> L: Sidoo kaleAnotherXMLControlVar, lambarka) ayaa marka hore soo celin doona xaddiga xaddiga xaddiga hadda iyo cabirka giraanta. Waxay markaa u adeegsan doontaa codka su'aasha ah, ugu danbeyntii, bilawga codka qaabka looxadeyn.
Iskuduwida xakamaynta cabbirka ayaa isticmaali kara qiimaha soo socda:
0 - Jooji Sinta
1 - Dhawaaq codso hal mar, adigoon bedelin mugga hadda jira ama muraayadda godka.
2 - Ku cayaar dhawaaqa sida wareegsan, adigoon bedelin mugga jirkaaga ama goobaha kaluunka.
3 - Muuji mugga codka, adigoo isticmaalaya meeshii laga helay variable variable VolumeIn, hoos fiiri.
4 - U hel codka mugga ee codka ee hadda, adigoo ku dhejinaya variable variable VolumeOut.
5 - Ku samee digsiga sanqadha, adigoo isticmaalaya meesha ay ku taal variable variable ee Panini.
6 - Qaado hannaanka galka saxda ee sanqadha ee hadda, adigoo ku dhexjiraya variable-ka PanOut.
7 - Dhawaaq codso hal mar, laakiin marka hore waxaad dhigtaa mugga iyo muraayadda goobaha laga helay VolumeIn iyo PanIn variables.
8 - Ku ciyaar dhawaaqa sida wareegsan, laakiin marka hore waxaad dhigtaa miisaanka iyo muraayadda goobaha laga helay VolumeIn iyo PanIn variables.
9 - Xaqiiji qaylada codka. 1 ayaa ku soo laaban doona haddii codka lagu ciyaaro loo yaqaan '0', haddii codku uu ciyaarayo mar uun ama uusan ciyaarin.
10 - Ka qaad codka. Codadka waxaa si toos ah loogu rakibi doonaa ciribtirka, laakiin haddii faylka codka uu yahay mid weyn, oo aad la sameysid, waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad isla markiiba xayeysiiso, oo dib u soo xasuusato xasuusta. Amarkan waxaa sidoo kale laga faa'iideysan karaa inta lagu jiro baaritaanka. Waxaad sameyn kartaa isbeddelka codka oo dib u cusbooneysiin kara, iyada oo aan dib loo soo celin dhammaan guddiga.
11 - Ku dheji cod, adigoo isticmaalaya qalabka codka Windows. Caadi ahaan cabirku wuxuu isticmaali doonaa qalabka dhawaaqa Windows si uu u ciyaaro dhawaaqyada. Haddii aad rabto inaad isticmaasho qalabka Windows codka (sida caadiga ah kaarka codka labaad, ama qalabka dhawaaqa USB) waxaad isticmaali kartaa qiimaha 11 si aad u buuxiso qalabka lagu ciyaaro qalabka codka. Dhammaan amarrada kale, haddii ay qasab ku noqdaan inay codkooda ku dhameeyaan ka hor inta aysan qaban hawlahooda, waxay ku dhejin doonaan dhawaaqa qalabka dhawaaqa Windows. Haddii aad rabto inaad isticmaasho qalabka codka, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho amarkan si aad marka hore u buuxiso codka ka hor inta aadan wax kale samaynin. Haddii qalabka codku uu yahay qalab la mid ah qalabka dhawaaqa, codka waxaa lagu dhajin doonaa iyadoo la isticmaalayo qalabka dhawaaqa ee la heli karo. Haddii aad rabto in codka lagu ciyaaro iyada oo loo marayo kulaylka isticmaalaha, haddii ay joogaan, waxaad isticmaali kartaa qiimahaas. Haddii qof kale oo aan haysan lahjo, codka isku midka ah ayaa lagu ciyaari doonaa qalab kasta oo codka ah ee uu isticmaalo. Ku lifaaqan xirmadan waa adeeg kaas oo u oggolaanaya inuu isticmaalo si cad u tilmaamaya aaladaha dhawaaqa si loo isticmaalo. Waxaan rajeynayaa in dhammaan kiisaska, adeegyadani aan looga baahnayn. Waxa kaliya oo loo baahan yahay haddii userka uu dareemo in qiimaha default default ee Windows aysan ahayn mid ku habboon FS, laakiin aan dooneynin inay bedelaan habka Windows.
12 - Sida 11 kor ku xusan, laakiin codka culeyska adigoo isticmaalaya qalabka dhawaaqa Windows.
Qeybta Config ee faylka .ini, waxyaabaha soo socda ayaa la sameyn karaa. Dhammaantood waxaa lagu muujiyay qiimaha caadiga ah ee u dhigma.
Badbaadada waa 10, laakiin ugu badnaan waa 1000. (Haa, waad akhridaa xaq!) Anigu ma arko qof cidkale isticmaalaya, laakiin xasuusta waxaa loo qoondeeyey hadda si siman, sidaa daraadeed wax dhibaato ah ma laha xadka sare. Waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala ee udubdhexaadka ah in ay ka fogaadaan in ka badan hal tusaale oo ka mid ah jaantuska isla hal guddi. Waxaan arkay arintaas. Ku haynta ugu badnaan tirada codadka aad isticmaali doontid waxay yareyneysaa labadaba isticmaalka CPU iyo isticmaalka xasuusta labadaba.
Haddii ay dhacdo nooc ka mid ah qalad is khilaafaya, cabirka xakameynta cabbirka ayaa lagu qeexi doonaa qiimahaas. Qalabka ayaa ah -1. Waxaad ka qaadan kartaa qiimaha jaangoo dhan ee aad jeceshahay, marka laga reebo inta u dhaxaysa 1 ilaa 99, kaas oo loogu talagalay amarrada dhabta ah. Muujinta hadda waxay leedahay dhowr farriimo farriimo oo Windows ah oo lagu dhisay taas oo u muuqata haddii ay dhacdo qalad. Waxaan rajeynayaa in qofka keliya ee aad arki doontid uu dhici doono haddii shaandhuhu uusan helin faylka codka ee lagu qeexay faylka .ini. Si loo fududeeyo xalinta dhibaatada, waxay u sheegi doontaa cidda u adeegsata faylka aan la helin. Haddii qalad dhaco, wixii isbeddel ah ee dheellitirka ah ee isbedelka codka ee maqalka ayaa la iska indho tirayaa. Si kastaba ha ahaatee, dhawaqyada kale waa la baari doonaa.
Waxaad bedeli kartaa qiimahaa 3 qiimaha macnaha leh.
1 - wuxuu joojiyaa dhammaan dhawaaqyada hadda ciyaaraya.
2 - wuxuu isku rogaa dhammaan dhawaaqyada. Waxa ay miisaankoodu yahay in -10000, laakiin ma joojiyo inay dhabtii ciyaaraan.
3 - wuxuu calaamadeeyaa dhammaan dhawaaqyada hore loo rogay. Waxay dib u soo celisaa goobihii hore loo kaydiyay mugga.
Xaalad kasta, variable ayaa loo rogi doonaa 0.
Isticmaalaan doorsoomahaan si aad u sheegto goobta xajmiga ee loo isticmaalo nidaamka SetVolume (3). Qalabka waxaa lagu qeexay qiime u dhexeeya 0 (buuxda mugga) iyo -10000 (100 db soo raridda, lama garan karo). Dhaqan ahaan, goob kasta oo aan ka yarayn -3000 (30 db isdilidda) lama garanayo.
Isticmaalaan doorsaarahaan si aad u sheegtid meesha aad u isticmaali laheyd isticmaalka SetPan command (5). Pan waxay ku qeexan tahay qiimaha u dhexeeya -10000 (buuxa bidix) iyo 10000 (xaq buuxda). 0 waa la duudduubay.
Isticmaalaan doorsoomahan si aad u hesho mugga qoondabka laguu soo celiyay amarka GetVolume (4).
Isticmaalaan doorsoomahan si aad u heshid shaashadda laguu soo celiyey amarka GetPan (6).
Isticmaalaan doorsoomahan si aad u hesho wareegga wareegga laguu soo diray Amarka Xaaladda Gaaritaanka Goobta (9).
Isbadelkan ayaa si toos ah u heli doona mugga qiyaasta la isticmaalay markii codkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha la soo saaro. Ogsoonow in heerkan mugdiga ah uusan mar dambe dalban karin - waxaa laga yaabaa in lagu bedelay Amarka SetVolume.
Qiimeeyahan ayaa si toos ah u heli doona galka ciqaabta marka la isticmaalayo amarkii ugu dambeeyay ee la soo saaray. Ogsoonow in goobtani ayan mar dambe dalban karin - waxaa laga yaabaa in lagu bedelay amarka SetPan.
Isbedelkan wuxuu si toos ah u heli doonaa goobta loo yaqaan "loop loo isticmaalay" markii la soo saaray amarkii ugu dambeeyay.
LVARS kale, magacyada aan la dooran karin:
Laba FS9 iyo FSX labadaba, beddelkan ayaa ku soo noqon doona 1 haddii dhawaaqyada FS ay yihiin kuwo firfircoon iyo 0 haddii aysan ahayn. Calaamadaha dhawaaqa ayaa waxay raaci doonaan heerka codka FS - waxay ku turjumayaan haddii codka FS uu maqan yahay ama haddii siman la joojiyay.
Xakamaynta Maqalka Hore:
Degi karo. Haddii la dhigo 1, cabirku wuxuu isticmaali doonaa xaddiga qadiimka ah ee 0 ilaa 100, iyadoo 100 ka dhigan tahay mugga buuxa iyo 0 oo matalaya si buuxda. Haddii la dhigo 0, cabirku wuxuu isticmaali doonaa xadka tooska ah ee DirectSound, kaas oo ah -10000 si buuxda u furfuran, 0, oo matala mugga buuxa. Ogow in haddii qiyaasta la qiimeeyo qiimaha wanaagsan ee qiyaasta qaybta [NOW] ee feylka .ini, waxay ku talin doontaa inaad rabto inaad isticmaasho qadashadii hore waxayna ku haboontahay variablekaas. Si farsamo ahaan u jajaban, qiyaasta tooska ah ee DirectSound waxay u taagan tahay xeeladaynta 100ths of decibels, sidaa daraadeed qiimaha -10000 waxay u taagan tahay taxadar qadaadiicda 100. Ha baddalin isbeddelkan marka la dejiyo - waxyaabo xun ayaa dhici doona.
Qiimeeyahan ayaa tilmaamaya haddii qalab gaar ah oo la heli karo. Waxay soo celisaa 1 haddii nidaamku leeyahay qalabka dhawaaqa Windows iyo qalabka codka, iyo 0 haddii kale.
Isbeddeladani waxay soo celinayaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaabka loo yaqaan "Flight Simulator" oo ah in shaxda la socdo.
FSVersionMajor wuxuu 9 u celiyaa FS2004 iyo 10 ee FSX. La soo bandhigo haddii aad rabto in aad isticmaasho lambarrada gaarka ah ee khaaska ah ee ku qoran sheygaaga gaarka ah.
FSX Kaliya. Waxay soo celisaa 1 haddii isku xirnaanta SimConnect iyo 0 haddii aysan ahayn.
FSSim Isku Xiran:
Waxay soo celisaa 1 haddii jilitaanku istaago, iyo 0 haddii aysan ahayn.
Laba FS9 iyo FSX labadaba, qiimehahan ayaa ku soo noqon doona 1 haddii cabirku uu ku dhawaaqay dhawaaqiisa iyo 0 haddii codadka aan la moodin.
Laba FS9 iyo FSX labadaba, beddelkani wuxuu ku noqon doonaa 1 haddii qalab XML uu ku dhawaaqay dhawaaqyada adoo dejinaya GlobalCommands variable qiimaha 2. Inkasta oo dhawaaqyada shakhsiyadeed aysan awoodi karin in la dhigo heerarka mugga, codadka si toos ah uma joogsanayn isbeddel ku yimaada isbedelka codka ama xaalad joojinta. Waxaad u baahan doontaa inaad si isdaba-joog ah adoo dejiya xayeysiiska Global Command ee 3. Haddii codadka aan sidaas loo badin, variable wuxuu yeelanayaa qiime eber.
FSX Kaliya. Laga soo bilaabo SimConnect.
0 - Fudud (banaanka) muuqaal ah.
1 - 2D view cockpit
4 - Muuqaalka sawirka
FSX Kaliya. Qiimaha caadiga ah waa eber. Haddii aad ku qorto qiime aan lahayn eber, qiimaha ViewSystemStatus, kor ku xusan, waxaa lagu daabici doonaa Box Message Windows, mar kasta oo ay isbedesho. Sida iska cad, tijaabinta kaliya.
FS2004 Kaliya. Waxay ku soo celineysaa jadwalka kale ee Maalinta Maalinta.
Marka laga reebo labada qaybood ee ugu horeeya ee ku jira qaybta [Sounds], tusaalahan soo socda waxay muujinaysaa qiimaha caadiga ah ee ku habboon in la isticmaalo marka maqnaanshaha qiimaha la isticmaalo, ama haddii maqnaanshaha faylka qaabeynta guud ahaan. Gelitaanka codka ugu horeeya wuxuu muujinayaa qeexitaanka dhawaaqa ku yaal gudaha faylka lagu magacaabo PanelSounds, oo leh buugan lagu dhexjiray galka panelka. Laba xarafood ee ugu horeeya maqalka waxay muujinayaan qeexitaanka qiimaha mugga ee loo qoondeeyo codka marka ugu horeysa ee lagu cabbiro qiyaasta. Goobaha ugu horreeya iyo saddexaad waxay muujinayaan qeexitaanka faylka, oo ku jira faylka, iyada oo la isticmaalayo faylkaas oo ku yaala isla buugga faylka qaabka.